समाचार « Kakharaa
काठमाडौं । नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको
काठमाडौं । सेनाले युद्धकेन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गरेको छ । आगामी साउनदेखि नयाँ संरचना लागु हुनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको वेला जस्तै चारवटै सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमान्ड र प्रधानमन्त्रीमातहत रहने एकीकृत इन्टेलिजेन्स
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विरुद्धको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पुणयप्रसाद खतिवडाले दायर
कडा सुरक्षाबीच सुर्खेतको राउटे वस्ती ‘सिल’, घटनाबारे राउटे समुदाय अनविज्ञ
सुर्खेत । राउटे युवतीमाथि दुव्र्यवहार भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले राउटे वस्ती सिल गरेको छ । राउटे समुदायबाटै पीडित युवतीमा जोखिम बढ्ने त्रासका कारण कडा सुरक्षाका बीचमा वस्ती सिल गरिएको
बागलुङको एकै टोलमा १ सय बढी संक्रमित, उपल्लाचौर क्षेत्र ‘सिल’
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौर क्षेत्रमा एकै पटक धेरैजनामा कोभिड–१९ संक्रमित भेटिएपछि केही टोल ‘सिल’ गरिएको छ । उपल्लाचौरको डुंडुंगा, राइटरचोकदेखि कटरको बोट, आँखा उपचार केन्द्र, रेडक्रसहुँदै वडा कार्यालय क्षेत्रमा
नयाँ म्यूटेन्ट र भेरियन्ट आउँदा खोपको प्रभावकारिता कम हुँदै जान्छ– डा. पुन
काठमाडौं । भाइरोलोजिस्ट डा. शेरबहादुर पुनले कोरोना भाइरसको नयाँ म्यूटेन्ट र भेरियन्ट आउँदा खोपको प्रभावकारिता कम हुँदै जाने बताउनुभएको छ । ईमेज टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा डा. पुनले खोप बनाउँदा भाइरसको एउटा
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक, राष्ट्रपतिमाथि फेरि प्रश्न !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ
होलीमा दुई युवालाई भीरबाट खसालेका १२ आरोपी जेल चलान
बागलुङ । जिल्लाकाे बल्देधुरी घटनामा संलग्न १२ जनालाई जेल चलान गरिएको छ । गत चैत १५ गते होली खेल्ने क्रममा दुईजना युवालाई भीरबाट खसालेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १२
सरकारले ‘खुवालुङ’ हटाउने कार्यक्रम समावेश गर्दा किराँत समुदाय आक्रोशित
धनकुटा । किराँत समुदायले पुज्दै आएको सप्तकोशी नदीमा रहेको ठूलो ढुंगा खुवालुङ फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सप्तकोशी नदीमा पानी जहाज संचालन गर्नका लागि
कोभिडले एक सातामा एकै परिवारको तीन जनाको मृत्यु
उदयपुर । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण एक सातामा एकै परिवारका तीनजना मृत्यु भएको छ । उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–७ मुर्कुचीका ७१ वर्षीया वृद्धा र उनका दुई छोराको एक साताभित्र मृत्यु भएको हो